ZESN Inoti Munyika Ngamuve Nehurongwa Hwakajeka Hwekudzivirira Mhirizhonga
Kubvumbi 19, 2010
Sangano rinokurudzira kuti munyika muve nesarudzo dzakachena, reZESN, rinoti nyika inofanirwa kuve nenzira dzinoratidza kana kuchizoitika mhirizhonga, kuitira kudzivirira kudzokorora zvakaitika musarudzo dzekutsvaga mutungamiri wenyika dzemuna 2008.
ZESN inoti munyika mune kusagadzikana munyaya dzezvematongerwo enyika, izvo zvinogona kumutsa mhirizhonga munyika. Sangano iri rinoti mamwe matunhu emunyika atove nzvimbo dzakaberekera ingwe, sezvo mamwe mapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano anoshanda akazvimirira oga asisatobvumidzwa kusvikako.
Vachitaurawo muHarare neSvondo pamhemberero dzekucherechedza makore makumi matatu nyika yawana kuzvitonga kuzere, mutungamiri wenyika VaRobert Mugabe vakashoropodza nyaya yemhirizhonga, vakakurudzira vana veZimbabwe kuti vashande pamwe murunyayararo.
Sachigaro weZESN, VaTinoziva Bere vaudza Studio 7 kuti mapurisa anofanirwa kutungamira mukuona kuti mhirizhonga yadzivirirwa, kwete kuti vapete maoko sezvavakaita muna2008. Vatiwo mashoko aVaMugabe anofanirwa kuonekwa nemabasa, kwete kungotaura paruzhinji chete.